वर्तमान टान नेतृत्वले सदस्यहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गर्‍यो
प्रकाशित मिति: 2017/09/11
दीपक महत, अध्यक्ष –नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (नीट)
नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (नीट)का केन्द्रिय अध्यक्ष तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का पूर्व अध्यक्ष दीपक महतसँग गन्तव्य नेपाल न्यूजले गरेको अन्तरंग संवादः
टानको निर्वाचन मिति घोषणमा ढिलाई भइरहेको भन्ने छ यसलाई तपाईहरुले कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
वास्तवमा सेप्टेम्बर पछि पर्यटकीय सिजन सुरु हुन्छ । सोही कारण सेप्टेम्बर महिनामा साधारण सभा र निर्वाचन हुने धेरै पहिले देखिको परम्परा हो । तर यो पटक अक्टुबरमा साधारण सभा गर्न खोजीएको छ भन्ने बुझिन आएको छ । रमेश धमला नेतृत्वको अघिल्लो कार्यसमितिले अक्टुबर १४ मा निर्वाचन गराएर अक्टुबर २८ मा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको कारण दुई वर्ष पूरै समय हामीले नेतृत्व सम्हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सुन्न आएको छ । गणितिय हिसावले भन्दा त्यो कुरा सही होला तर संगठन संचालन र परिचालनको कुरा गर्दा अघिल्लो वर्ष के भयो भन्ने कुरालाई महत्व दिएर परम्परालाई तोड्ने काम गर्नु हुदैन ।
सन् १९९८ मा पेम्बा शेर्पा अध्यक्ष हुदाँ ६ महिना अघि नेतृत्व छोडेर हामीले यो सिष्टम बसाल्यौ अहिले रमेश धमलालाई उदाहरण दिएर निर्वाचन सार्ने र अझ म्याद थपेर टानलाई लुट्न चाहनु हुन्छ । रमेश धमलाले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न केही ढिलो गर्दा सेप्टेम्बर महिना भित्रै चुनाव गराउनुपर्छ भनेर अड्डा अदालत धाउने अहिलेका अध्यक्ष चन्द्र रिजाल आफै यस्तो काम गर्न किन उद्धत हुनुहुन्छ ?
तर मलाई जहाँ सम्म लाग्छ लोभि, पापी मनस्थितीको स्वरुप यो चुनाव सेप्टेम्बर भित्र नगराउन खोजिएको हो । अक्टोबरमा गर्ने भन्नासाथ अक्टुबरमा त मतदाताहरु व्यस्त हुन्छन अनि भन्न के पाइन्छ भने मतदाताले नै अस्विकार गरेपछि त हामीले निर्वाचन गर्ने कुरै आएननी । अनि अक्टुबरमा नभएपछि नोभेम्बर पनि पर्यटकीय सिजन नै हो । अनि डिसेम्बरमा लान पाईयो अनि कतिको दबाव आउछ त्यसको आधारमा ६ महिना कार्यकालनै थपेर जाने भन्ने षड्यन्त्रमा उनीहरु लागेका छन् ।
उसो भए निर्वाचन सार्ने मात्र होइन कार्यकाल नै थप गर्ने षड्यन्त्र भईरहेको छ हो ?
उहाँहरुले चाहनु भएको भए सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिम सम्ममा गर्न सक्नु हुन्थ्यो । रमेश जिको समयमा अक्टुबर २ तारिखमा निर्वाचन मिति तोकिएको थियो । मजदुरहरुले घेराउ गरेर २ तारिखमा निर्वाचन हुन नसक्ने वाध्यात्मक अवस्था सृजना भएपछि त्यसलाई १४ तारिखमा सारिएको थियो । त्यो बेला त परिस्थितीनै त्यस्तै थियो । अहिले त उहाँहरुलाई कुनै परिस्थती आइलागेको त छैन नी ।
पेम्बा शेर्पाको कार्यसमितिले ६ महिना अगाडि नेतृत्व छाडेर सिष्टम बनाएको उदाहरण हुदाँ हुदै सेप्टेम्बरमा चुनाव गराउन नपर्ने कुनै कारण छैन । रमेश धमलालाई उदाहरण दिएर आफुलाई निकम्मा सावित गर्न जरुरी छैन । साधारण सभामा पेश नगरिएका कुराहरु संशोधन गरेर ल्याइएको छ । उहाँहरुले ठुलो गद्दारी गर्नु भएको छ । जसरी कोषाध्यक्षको अधिकार कटौती गर्नुभो । त्यसै गरि ६ महिना कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्नुभएको छ रे भन्ने सुन्नमा आएको छ । लोभ, पापले त मान्छेलाई गर्नै नहुने काम गर्न पनि अभिप्रेरित गर्छ नी त । उहाँहरुले टानको सदस्यहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै जुन काम गर्दै हुनुहन्छ तर त्यो हुन हामी दिदैनौ ।
निर्वाचन मिति घोषणामा ढिलाई भइरहदा तपाईहरु किन मौन त ?
सेप्टेम्बर भित्र कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुनपर्छ । अझै पनि समय छ । निर्वाचन कमिटि बनाउनु भएको छ तर मिति तोक्नु भएको छैन । विद्यानत १५ दिन अघि सुचना दिनुपर्छ भन्ने छ १५ दिन अघि सूचना दिने समय त अर्झै छ ।
वा रमेश धमलाले गरेजस्तो अक्टुबर २ तारिखमा तोक्दा पनि कुनै फरक परेन । त्यो भनेको पनि लगभग लगभग सेप्टेम्बरको अन्त नै हो ।
मैले अघि पनि भने चन्द्र रिजालले रमेश धमलाको समयमा जुन उताउलोपन देखाएर मुद्धा मामिला तिर जानु भयो । हामीले त्यसरी जान नखोजिकन भद्र हिसावले उहाँहरु नैतिक धरातलमा उभिनुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौ । सेप्टेम्बर भित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यसैकारण उहाँले जस्तो उताउलोपन देखाएर मुद्धा मामिला गर्न नखोजेका हौ तर अव आवश्यक प¥यो भने त्यो पनि गर्न पर्ने स्थिती आउन सक्छ ।
विद्यान संशोधानको विषयमा विभिन्न पार्टीप्रति झुकाव राख्ने पर्यटकीय संघसंस्थाहरु मौन किन ?
खै विद्यान हेर्न पाएको, विद्यान नै लुकाएर हिडी राखेका छन् । विद्यान मात्रै होइन माइन्यूट सम्म पनि कार्यसमितिका जिम्मेबार पदाधिकारीहरुले माग्दा समेत नदिएर लुकाएर हिडिएको छ । यती सम्म तानाशाही वर्चस्व कायम गरिएको छ । टानको इतिहासमै यस्तो तानाशाही, उत्ताउलो, अनियन्त्रित र असभ्य काम अहिलेका अध्यक्ष चन्द रिजालले जस्तो कसैले गरेकै छैन ।
प्रसंग बदलौ, पर्यटकीय संघसंस्थाहरुमा यति धेरै राजनीति चाँही किन हुन्छ ?
विगतमा पार्टीगत रुपबाट उम्मेदवारहरु उठ्ने र उठाउने प्रचलन जुन बस्यो त्यो चाही गलत परिपार्टी हो । व्यवसायीक छाता संगठन भनेको अलग–अलग मतमा उभिएका तर एउटै व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । त्यो छाता भित्र सबै अटाउनुपर्छ । व्यवसायीक छाता संगठनले सबैको घाम, पानी छेकिदिनुपर्छ । र उद्योगको हितमा त्यसले काम गर्नुपर्छ ।
तर २०६२/६३ को आन्दोलन पछि कम्युनिष्ट व्यवसायीहरुको तर्फबाट कम्युनिष्ट पार्टी नै नाममा व्यवसायीक संगठन गठन गर्ने परम्पराको थालनी भयो । व्यवसायीक ठाउँमा यस्तो राजनीतिकरण गर्न हुदैन भनेर हामीले पाखामै बसेर हेरिरह्यौ । तर उहाँहरु यसरी अघि बढिरहेपछि त्यसको केही वर्षपछि हामीले पनि आफ्ना साथीहरुलाई संगठित गर्न निट स्थापना गर्न बाध्य भयौ । निट बनाउन पनि हामीले पार्टीको नाममा नबनाइकन व्यवसायीक नामाकरण ग¥यौ । पछि उहाँहरुले पनि हाम्रै सिको गर्दै व्यवसायीक नाम त राख्नुभयो तर राजनीति भने गर्न छाड्नु भएन ।
जसको उदाहरण म दिउ, २०१५ सालको टान निर्वाचनमा हामीले आफ्नो नेतृत्व छाडेर राजनीतिक सोचहरुलाई अगाडि नल्याइ सहमतिकै आधारमा अघि बढे व्यवसायीक संस्थामा राजनीतकिरण हटेर जान्छ भनेर माओवादी पक्षधरका व्यवसायीक साथीहरुलाई नेतृत्व दिएर अघि बढ्न चाह्यौ । पछि चाही एमालेको तर्फबाट चन्द्र रिजालले नछाड्ने कुरा आयो अनि माओवादीबाट केहीले सागर पाण्डेलाई स्विकार्नु भयो भने केहीले हामीलाई अध्यक्ष पद चाहिदैन अध्यक्षमा चन्द्र रिजाललाई नै स्विकार गछौ भनेर जानुभयो ।
हामीले त एकता नै गर्न खोजेका थियो । चन्द्र रिजालको नेतृत्वमा जान पनि हामी तयार थियौ । हामी कोषाध्यक्ष लिएर रिजालकै नेतृत्वमा जान्छौ पनि भनेका थियो । यसले राजनीतिकरणका कुरालाई मलिनो बनाईदिन्छ भन्ने हाम्रो सोचाई थियो । तर केही साथीहरुले त्यो बेलामा पनि केही उताउलोपन देखाउदै निर्वाचनमा जानु भयो । जसको परिणम त एउटा पक्षलेमात्र चुनाव जितेन अनि टान गतिशिल हुन सकेन ।
त्यस्तै राजनीतकरण गर्न हुदैन उद्योगको एकतालाई बलियो पार्दै जानु पर्छ भन्नका लागि एनएमए निर्वाचनमा पनि सहमतिको प्रयास हामीले थालेका थियौ । तर माओवादी पक्षधरका साथीहरुले त्यो प्रयासलाई भाड्दै उम्मेदवार घोषणा गर्नुभयो । सहमतिको आधारमा नेतृत्व छान्न नसकेपछि हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवार जिम्बाजाङबु शेर्पालाई समर्थन गर्न बाध्य भयौ । जव हामीले जिम्बाको नाम लियौ माओवादीका साथीहरु एमालेसँग गएर मिल्नुभयो । यसले के देखायो त भन्दा सहमतिको कुरा कहिले माओवादीका साथीहरुले कहिले एमालेका साथीहरुबाट पटक–पटक तोड्ने कामहरु भएका छन् ।
हाम्रो प्रयासलाई हेर्नुभयो भने निट राजनीतकि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छैन । व्यवसायीक संघसंस्थालाई सहमतिका आधारमा अघि लैजानु पर्छ । हामी सबैको एजेन्डा एउटै हो त्यसकारण निट नेपाल पर्यटकीय संघसंस्थामा हुने राजनीतिकरणलाई २०६२/६३ अघिकै रुपमा फर्काउन चाहन्छ ।
त्यो सम्भव छ ?
भन्नलाई टुग्यादर फर टुरिजम भन्ने तर टुग्यादर नेस कहिल्यै पनि नदेखाउने हो भने भोली संघसंस्थाको हालत यो भन्दा पनि अझ विग्रेर जान्छ । अझै पनि ढिलो भएको छैन र असम्भव पनि छैन । तर विमती वा सहमति जे गरेर हुन्छ नेतृत्व आफ्नै चाहिन्छ भन्ने एमाले पार्टीमा आवद्ध साथीहरुको आन्तरिक निर्णय नै छ । र सोही अनुसार प्रयास पनि गरिरहनुभएको छ । जसको कारण हामीले गरेको प्रयासमा अहिले चाही ठेस पुग्न गएको छ । तर हामीले हिम्मत हारेका छैनौ । पर्यटन राजनीतिमूक्त हुनुपर्छ भन्ने मार्गमा नै हामी लागिरहेका छौ । कुनै दिन उहाँहरु पनि तपाईहरुकै बाटो ठिक रहेछ भनेर फर्कने छन् ।
एनएमए निर्वाचनमा त तपाईहरुले धाधली भयो भन्नुभएको थियो बास्तविकता के हो ?
धाधली भएका प्रमाणहरु त हामीले पेश नै गरेका छौ । तर नियामक निकायबाट हाम्रो प्रमाण सावित भएन । तर प्रमाण भनेको त प्रमाण हो । त्यो प्रमाणले उहाँहरुको शिर निहुरिएको छ । धाधली गरेरै जितेको हो भन्ने हिनताबोध भएकै छ । उहाँहरुले भन्दै हिड्न पो भएन । फेसबुकका भित्तामा रागका कुराहरु गर्नु बेग्लै हो । धाधली गरेरै जितको हो भन्ने परेको छ ।
उसो भए पार्टीगत नाममा खोलिएका संघसंस्थाहरुले पर्यटकीय संघसंस्थामा एकता विरोधी काम गरिरहेका छन् ?
मैले पनि त्यही कुरा भनिरहेको हो । तर तपाईले फेरि मलाई प्रश्न सोध्नु होला उसो भए निटको स्थापना किन गरेको भनेर । विभिन्न पार्टीसँग नजिक रहेका सुभेच्छुक, भातृ संघसंस्था हुन्छ । हामी नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हौ । सोही अनुसार हामीले पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौ । सामाजिक उत्तदायित्व पनि निभाई रहेका छौ । उदाहरणका लागि देशमा भूकम्प आउदा तत्काल राहत र पुर्नस्थापनाको काममा त हामीले खासै गर्न सकेनौ तर भूकम्पबाट थङथिलो बनेको लाङटाङ क्षेत्रलाई पुर्नजन्म दिन हामीले के कति ग¥यौ त्यो मैले भनिरहन पदैन सबैलाई थाहा नै छ । जहाँचाही वर्षौ देखि पर्यटक पठाएर कमाई खाएर बस्यौ ।
अर्को पछिल्लो बाढीपिडितलाई केही राहत सहयोग गर्‍यौ । सामाजिक उत्तरदायित्वका साथसाथै नेपालको पर्यटक प्रवद्र्धमा हामी आफुलाई उभ्याउन चाहन्छौ । हामी पर्यटकीय संघसंस्थामा हस्तक्षेप गर्न आएका होइनौ । बरु हस्तक्षेप गर्न आएका साथीहरुलाई सिकाउदै छौ ।
कुनै समय तपाईहरुले पर्यटन क्षेत्रको आवाजलाई थप बुलन्द बनाउन जेटिसिसि स्थापना गर्नुभएको थियो त्यसलाई किन विद्यटन गर्नुभयो ?
यसले पर्यटनमा क्रियाशिल विभिन्न सोच र विचारमा आवद्ध भएका साथीहरु बीच एक भएर अघि बढ्का निम्ति महत्वपूर्ण काम ग¥यो । जसको कारण पर्यटन बोर्ड भित्र हुने गरेका विकृती, विसंगती र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन छेड्न सकिएको थियो । जेटिसिसि बन्नु भन्दा अगाडि त्यो सम्भव थिएन । ज्ुन आन्दोलनको मोर्चाले जेटिसिसिलाई स्थापित पनि गराईदियो ।
आन्दोलन छेडिसकेपछि यसलाई छाड्ने, यसको आन्दोलनबाट भाग्ने क्रम सुरु भयो । जुन काम पनि एमाले सम्वद्ध व्यवसायी साथीहरुले नै गर्नुभयो । अहिले पनि त्यो जेटिसिसि विद्यटन त भएको छैन तर केही निस्कृय मात्र भएको हो । इच्छाशक्ति भए अहिले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर कुरा के छ भने एमालेका साथीहरु यसबाट बाहिरीएर यसको अस्तित्वलाई नमान्ने भएपछि छुट्टा–छुट्टटै अस्तित्व बोक्नलाई त हाम्रो निट छदैछ अरुको पनि अरु संघसंस्था छदैछ नी ।
त्यसकारण बाहिरिने साथीहरुलाई किन बाहिरिनु भयो आन्दोलनका क्रममा जेटिसिसि काम लाग्यो अहिले किन काम लागेन भनेर प्रश्न गर्दा ठिक होला । एकता निर्माण गर्न खोज्दा बाहिरीनेहरु, हामीले नेतृत्व तपाईहरु नै गर्नुस् तर सहमतिमा पर्यटकीय संघसंस्थामा नेतृत्व चयन गरौ भन्दा सहमति नगर्ने र धाधली गरेर भएपनि निर्वाचन जित्न रुचाउनेहरुले त्यहाँ बसेर आफ्ना इच्छाहरु पुरा गर्न सक्दैन थिए । त्यसकारण उहाँहरु बाहिरिनु भयो ।
यसलाई पुनः जिवन दिन सम्भव छैन ?
अहिले विभिन्न संघसंस्थाहरुमा एकछत्र हस्तक्षेप कायम गर्नुपर्छ भन्ने प्रदुषित भावका साथ केहीसाथीहरु अघि बढिरहेको अवस्थामा हामीले चाहेर पनि त्यो हुने वाला छैन । तर उहाँहरुले भने जस्तो विद्यटन भएको छैन । त्यसले गर्दा यहाँबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नेहरुबाट नै कुनै बेला जेटिसिसिको अस्तिव उजागर गर्न सद्वुद्धि फिर्ने छ । त्योबेला जेटिसिसि नै नभएपनि यस्तै उद्धेश्य सहितको अर्को कुनै संस्था जन्मन सक्छ ।
टानको विद्यान संशोधनको विषयमा निट लगायतका सबै संघसंस्था मौन बस्तुको रहस्य चाही के हो ?
एउटा समय थियो । जुनबेला तातो बहस भइरहेको थियो त्यो बेला एनएमएको निर्वाचन आयो । टानका धेरैजती सदस्य साथीहरु एनएमएको पनि सदस्य हुनुहुन्छ । अहिले हामी भएको के हो भनेर यथार्थ पत्ता लगाउदै छौ । र साधारण सभापनि आउदै छ साधारण सभामा पेशनै नगरेको कुरालाई उहाँहरुले कानुन अनुसार मिलाएर भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ । त्यसलाई साधारण सभाले त काट्न सक्छ । अर्को साधारण सभाका लागि तयार रहन चुनौती दिदै निट त्यसको तयारीमा लागिरहेको छ ।
अन्तमा : टानको निर्वाचन मिति तोकिएको छैन निटका सदस्यहरु अध्यक्ष लगायतका पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिड्न थालीसक्नु भएको छ । यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
हामी विगत दुई वर्ष यता सहमति र सहकार्यमा जोड दिदै आइरहेका छौ । सहमतिका लागि नेतृत्व छाडेर जान पनि तयार भएका हौ । यो कुरालाई प्रतिस्प्रर्धी साथीहरुले स्विकार गर्नुभएन र अहिलेको स्थिती सृजना भयो । निटले आज सम्म कुनै पनि पर्यटकीय संघसंस्थाको उम्मेदवारको निधो माइन्यूट मार्फत गर्ने गरेको छैन । यो विषयलाई हामीले माइन्यूटमा प्रवेश नै गराएका छैनौ ।
मात्र निटमा आवद्ध भएका इच्छुक प्रत्यासी उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरुको बीचमा समन्वय गराइदिने काम गर्दै आएका छौ । निटमा आवद्ध साथीहरु बीच मत बाझिनु हुदैन भनेर समन्वय गर्ने काम गर्दैैआएका छौ । उम्मेदवार हामी आफैले तोक्दैनौ । त्यसकारणले गर्दा जति साथीहरुले निर्वाचनमा इच्छा जाहेर गरिरहुन भएको छ । हामीले सहमतिका लागि विगतमा पटक पटक नेतृत्व अरुलाई सुम्पदा पनि सहमति हुनसकेन । त्यसकारण यो पटक हामी आफै नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति साथीहरुले दिनुभएको छ । यो निटको होइन उम्मेदवारको अभिव्यत्ति हो । एउटै पदमा दुई तीन जनाले इच्छा देखाईरहदा स्वयंम ती साथीहरुले नै हामी मिलेर अघि बढ्छौ भनेर तपाईहरुले मिडिया मार्फत भनेका छन् त्यसकारण निटले टान लगायत संघ संस्थामा संयोजनकारी भूमिका खेल्छ र उम्मेदवार तोक्छ ।